Kooxda Chelsea oo loo sheegay qiimaha ay kula saxiixan karto xagaagan Nicolas Tagliafico – Gool FM
Haaruun May 28, 2020
(London) 28 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa in loo sheegay inay awooddo inay la saxiixato daafaca garabka bidix ee naadiga Ajax, Nicolas Tagliafico haddii ay miiska soo saarto adduun dhan 22.4 milyan oo gini suuqa kala iibsiga xiddigaha ee soo aaddan.
27-sano jirkaan ayaa ka mid noqday daafacyada bidix ee ugu fiican qaaradda Yurub, isagoo ka caawiyay kooxda reer Holland inay gaaraan afar dhammaadka Champions League xilli ciyaareedkii hore.
Si kastaba ha noqotee, Tagliafico ayaa la soo warinayaa inuu raadinayo tartan cusub, iyadoo Kooxaha Chelsea, Arsenal, Barcelona iyo Atletico Madrid ay xiiseynayaan saxiixiisa.
Sida ay warinayso Jariiradda Telegraph in Blues la ogeysiiyey qiimo macquul ah oo ay kula wareegi karto daafacan, inkastoo ay tartan kala kulmayso kooxo kale oo ka dhisan qaaradda Yurub.
Chelsea ayaa xiriir wanaagsan la leh kooxda reer Holland, iyagoo horay heshiis 37 milyan oo gini ah ugula wareegay xiddiga garabka ka ciyaara ee Hakim Ziyech.
Tagliafico ayaa la rumeysan yahay inuu u furan yahay inuu u dhaqaaqo London, isla markaana uu doonayo inuu naftiisa tartan ku geliyo Premier League.
Isagoo la hadlayey horraantii bishaan Idaacadda Argentine ee Radio Continental, xiddiga reer Argentine wuxuu yiri: ‘Ajax waa koox weyn, laakiin ciyaaryahan ahaan dabcan waxaad ku riyooneysaa inaad ka ciyaarto horyaallada ugu waa weyn, Premier League hadda waa midka ugu tartamada badan, wuxuu xoogaa ka sarreeyaa La Liga iyo Serie A.’
Tagliafico ayaa dhaliyey lix gool 68 kulan oo uu u saftay kooxda reer Holland tan iyo markii uu ku soo biiray sanadkii 2018.